Ụlọ ụlọ ọrụ a na - akpọsa ụgbọ mmiri ndị na - akpọsa ụgbọ mmiri na - egosi na China Boegger
Unu nọ ebe a:Ụlọ > Products > Architectural Mesh > Ụdị:>Ụzọ a na - akpọsa
A na - eji wiri aluminium mee ihe a na - egbochi n’ahụ́, bụ́ nke a na - akpọkwa ihe ndị a na - akpọ egbochi e ji egbochi n’ahụ́. Dị ka anyị nile maara, ihe ndị a na - akpọ aluminium dị mfe, a na - enwe ntụgharị, na - adịgide adịgide, na - emekwa ihe a na - eme mgbanwe. Nke a na - egosi na a na - eme ka a ghara ịna - eme ka a ghara ịna - enwe mmasị na - eme ka ọkụ e gbochie. Ụzọ a na - eme ka a na - echebe ihe dị iche iche n’agbanyeghị na a na - eme ka a na - achọ mma. N’otu oge ahụ, e nwere ụdị egwú pụrụ izere ụmụ ahụhụ ma mee ka ikuku dị ọcha bụ́ nke na - eme ka ị dị ọcha. Tụkwasị na nke ahụ, ị pụrụ ịhọrọ àgwà ọ bụla dị ka otú ị ga - esi na - eme ihe e ji eme ihe. N’ihi abamuru ndị a, a na - achọ a na - achọ n’obodo a na - ada ada adabara ebe obibi, hotel, nri, Ụlọ ebe a na - azụ ahịa na ebe ndị ọzọ.
CLC-01 Ụzọ Ụzọ
CLC-02 Ụzọ Ụzọ ntị
Aha ihe ndị a na - arụpụta: a na - egbochi ákwà.
Nke a na - akpọ: wita aluminium.
Mmadụ a na - agwọ n’elu: a na - enwe ọrịa.
Ụlọ Nche: a pụrụ ịchọpụta ọlaọcha, ojii, achịcha, anụnụ anụnụ anụnụ anụnụ anụnụ anụnụ anụnụ, pọpọp, ọlaedo, ọlaedo na ụcha ndị ọzọ.
L Wire diameter: 0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm, 1.3 mm, 1.6 mm, 1.8 mm, 2.0 mm ma ọ bụ mgbe ị na - arịọ.
L Hook obodo: 9 mm ma ọ bụ mm 12.
L Hook oge: 17 mm, 20.4 mm, 22.5 mm, mm 24 mm, nz.
L ụhara: 0.8 m × 2 m, 0.9 m × 1.8 m, 0.9 m × 2 m, 1 m × 2 m, 1 m × 2.1 m na ihe ndị ọzọ.
Rịba: A na - enwekwa ihe ndị pụrụ iche dị ka ihe ndị ị chọrọ.
CLC-03 ọ̀tụ̀tụ̀ ntị na ọ̀tụ̀tụ̀ aṅaa
Ụfọdụ n’ime ihe dị mfe.
M dị mfe ịkwụnye ma kwusaa.
Mmadụ a na - eguzogide ọkụ, na - agaghị adịgide.
Mụ na - enwe mmasị n’ịgba n’ihu.
Ụzọ dị iche iche.
Ana m Zere ụmụ ahụhụ ma na - enwekwa ikuku ọhụrụ.
A pụrụ ịchọpụta n’ụcha dịgasị iche iche maka ụzọ dị iche iche.
Ụfọdụ n’ihe ndị a na - eme ka a na - eme ka a mara mma, na - emekwa ka a na - achọ mma n’ụzọ dị ịtụnanya.
A pụrụ iji ákwà ụda dị ka:
Mmadụ na - enwe mgbidi.
Ụfọdụ n’ime Windo.
Ụfọdụ n’ebe a na - arụ ọrụ.
N’ihi ya, a na - eji ebe nile akwụsị iji:
Ụfọdụ n’ihe ndị a na - akụzi.
Ụzọ n’ebe ahụ.
Ụlọ ụlọ nzube.
Ụlọ Nzukọ n’ime ihe.
Ụzọ a na - akụzi.
A na - ekwesị n’elu elu
A na - ekwesị n’ebe a na - anọ n’ebe windo
Ụlọ ụlọ nri a na - akpọ n’ahụ́
Ọtụtụ n’ebe a na - akpọ n’elu elu n’ebe a na - eme n’ebe a na - akọ n’ahụ́
Na - eji ákwà e ji okwu dị n’aha
Ana m na - etinye ákwà n’ọkụ n’akpa plastik, e mesịa ịkpọ akù plastik n’aka katọn n’usoro.
A Roll aain ewu n'ahụ́ n'okpuru akwụkwọ a na - apụta mmiri ma ọ bụ fim plastik, Ụfọdụ a na - akpọ n’akwụkwọ n’akwụkwọ n’akwụkwọ n’akwụkwọ n’akụkụ ma ọ bụ n’akụkụ osisi dị ka ihe ị na - arịọ.
Akwụkwọ a na - akpọ ụkwụ e ji fim plastik mee
Ụfọdụ n’igbe katọn a na - akụkọ ọnụ
Iji mee ka a na - egbochi ụzọ e si egbochi egwú, e nwere ụzọ atọ dịgasị iche iche isi n’igbochi egwú. Otu n’ime ụgbọ okporo ígwè, ndị ọzọ bụ n’ebe a na - egbochi. Ịnyịnyekwa mgbakọ a na - agụnye ịnyụnye U track na ịnyịnya H. Ha nile na - enwe ụdị ígwè a na - eji ákwà dị arọ n’ahụ́. Ụzọ atọ ndị a bụ ihe ndị dị nnọọ mfe nye gị. Nanị ihe dị mkpụrụ osisi ole na ole dị n’akụkụ mgbidi ma ọ bụ n’elu elu, kwụsịkwa ákwà ahụ n’elu ya.Nhazi:
Ịgba n’elu elu
Ịga n’oge a na - akpọ n’oge a na - akpọ n’ahụ́
Àgwà ndị dịgasị iche iche nke a na - akpọ n’ụgbọ okporo ígwè a
Àgwà ndị dịgasị iche iche nke a na - akwado n’oge h
Mwagụ̀ chain link curtain, chain fly screen, aluminum chain curtain,
Ụfọdụ n'ahịa n'ahụ́ bụ ihe onwundụ a na - adọrọ mmasị, a na - enwe nzukọ, nnukwu nri, na - enye aka nnukwu mfe maka ndị ọrụ ọha na eze ka a na - edebe ebe ndị mmadụ na - anọghị anya. Aluminium Chain F...
N’ebe a na - akwụsị n’ebe a na - akwụsị n’ahụ́
E mepụtara site n'iji aka ekpe na n'aka nri e jikọtara n'aka ya na nru e jikọta iji mee ka e wee a na-azọ na - enye. E ji akwụkwọ ozi bụ́ “B. ”B = a na - akpọ n’akwụkwọ.Ụfọdụ n’ime ụkwụ 72 n’ime ụkwụ....
Mgbidi Ụzọ n’Aluminum na Nọcha Na - esi n’Ụzọ
A na - akpọkwa ákwà mmiri a na - akpọ egwú a na - akpọ egwú a na - akpọ egwú, bụ́ egwú e ji egwú. A na - emepụta ya site na 100% ihe ndị e ji aluminium, bụ́ nke dị nnọọ n'obi. Ọtụtụ a na - akpọ alumin...